काठमाडौँ, ३ चैत । नेपाल प्रहरी २४ सै घण्टा समाजसेवामा व्यस्त हुन्छन् । कतिपयलाई लाग्न सक्ला २४ सै घण्टा समाजसेवामा लाग्ने प्रहरीका श्रीमतीले कसरी दिन बिताउलान् ? तर, प्रहरीका श्रीमतीहरुले पनि सङ्घ स्थापना गरी सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् ।
सङ्घ सहसचिव अजिता लोहनी पन्त आगामी दिनमा पदाधिकारी तथा सदस्यलाई सङ्घको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी विषयगतरूपमा सबैलाई क्रियाशील गराउने लक्ष्य सङ्घले लिएको बताउनुहुन्छ । सङ्घद्वारा सञ्चालित दिवा शिशु स्याहार केन्द्रको आवश्यकताअनुसार विस्तार गर्दै लैजाने लोहनीको भनाइ छ । रासस
मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको चर्चा चलिरहेको बेला प्रचण्ड भने श्रीमती र छोरी ज्वाईंसहित आज अमेरिका जाँदै !
योगेश भट्टराईलाई पर्यटनमन्त्री बनाउन प्रचण्डको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा अस्वीकार